Somaliland: Wasiirka Ganacsiga Oo Tafaasiil Ka Bixiyay Shir Caalamiya Oo Ku Saabsan Maalgashiga Somaliland Oo Lagu Qaban Doono Jarmalka - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Wasiirka Ganacsiga Oo Tafaasiil Ka Bixiyay Shir Caalamiya Oo Ku Saabsan...
“Dalkeennu Wuxuu Shirka Berlin ku soo bandhigayaa Khayraadka Baaxadda Leh Ee Dihin Ee Ku Duugan Somaliland kuwaasoo ay ka mid yihiin Xoolaha Nool, Beeraha iyo Kalluunka” Wasiirka Ganacsiga iyo maalgashiga
Wasiirka Ganacsiga iyo maalgashiga Jamhuuriyadda Somaliland Eng. Xuseen Aadan Cigge (Xuseen Deyr), ayaa daboolka ka qaaday shir caalami ah oo lagu soo bandhigi doono fursadaha maalgashi ee Somaliland u baahan tahay oo lagu qaban doono dalka Jarmalka.
Wasiirka Ganacsiga Iyo maalgashiga caalamiga ahi waxa uu sheegay in shir caalamiya oo maalgashiga Somaliland la xidhiidha uu ka furmi doono magaaladda Berlin ee dalka Jarmalka.
Sidaasna waxa uu Wasiirka ganacsigu ku sheegay war-murtiyeed uu caawa soo saaray oo u dhignaa sidan:-
Shirkani waxa uu daba socdaa shirkii Maalgashiga ee hore uga dhacay Dalka Ingiriiska oo lagu qabtay magaalada London 24.10. 2014-kii (UK-Somaliland Trade and Investment Conference). Shirkan ka dhici doona Dalweynaha Jarmalka waxa diiradda lagu saari doonaa dar-dar gelinta iyo dhiirri-gelinta fursadaha Maalgashi iyo dhaq-dhaqaaqyada Ganacsi ee u dhexayn kara ama ay yeelan karaan labada dal ee Jam. Somalinad iyo Germany.
Haddaba, guud ahaanba ujeedooyinka ugu muhiimsan ee ay Xukuumadda Jam. Somaliland ka leedahay shirka Berlin waxay kala yihiin:-
1-In Dalkeenu Shirkaa Berlin ku soo bandhigo Khayraadka baaxadda leh ee dihin ee ku duugan Dalkeenna, kuwaasoo ay ka mid yihiin: Xoolaha Nool, Beeraha, Kalluunka, Noocyada kala duwan ee Macdanta, Shidaalka iyo Tamarta ku jirta dhulka hoostiisa, Xabkaha iyo Faleenka, Sibidhka, Milixda, Dalxiiska iyo khayraadka kaleba.
2-In khayraadka Dalkeena ceegaaga loo helo Maalgashi Shisheeye, ha noqdo maalgashi Dawli ah ama mid gaar loo leeyahay. Tallaabadani waxay Qaranka JSL u horseedi kartaa in dhaqaaluhu si weyn u kobco, in lala dagaalama faqriga, in da’yarta loo abuuro shaqooyin si ay rajadooda iyo filashadooduba kor ugu kacaan, taasina ay wax ka bedeli doonto Aafada Tahriibta oo halis ku ah jiritaanka nololeed iyo aayaha mustaqbalka da’yarteena.
3.In Ganacsatada u dhalatay Jam. Somaliland ay helaan fursad ay kula kulmi karaan oo ay ku bartaan Ganacsata Germany isla markaana ay isu waydaarsan lahayeen xog iyo waayo-aragnimo la xidhiidha fursadaha xagga Ganacsiga iyo Maalgashiga.
4.In la suurto galiyo sidii loo heli lahaa fursado Maalgashi oo ay si Wadajir ah u sameeyaan Ganacsatada reer Somaliland iyo Ganacsatada u dhalatay Dalweynaha Jarmalka.
Sidaa darteed, Wasaaradda Ganacsiga iyo Maalgashiga, Wasaardda Arimaha Dibadda iyo Xidhiidhka Caalamiga iyo Rugta Ganacsigu waxay si wada jir ah ugu dhiiri-galinayaan in Ganacsatada Dalka Jam. Somaliland ay si mug iyo miisaanba leh uga qayb qaataan Shirkan 06.06.2016-ka ka dhici doona Caasimada Dalka Germany ee Berlin. Ganacsatada reer Somaliland waxaanu si weyn ugu boorinaynaa inay ka faa’iidaystaan Fursadaa iyada ah isla markaana ay si aqooni ku dheehantahay u soo bandhigaan noocyada kala duwan ee adeegyada gancasigooda si ay dalka ugu soo jiidi karaan fursado ay dadka iyo dalka Germany dalkeena ku Maalgashan karaan iyo xidhiidh cusub oo Ganacsi oo labada dal ka hanaqaada.
Eng. Xuseen Adan Cige (Xuseen Deyr)
Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Maalgashiga